DAAWO: Madaxwaynaha Somalia oo caddeeyay moowqifka Somalia ee dacwadda badda | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Madaxwaynaha Somalia oo caddeeyay moowqifka Somalia ee dacwadda badda
DAAWO: Madaxwaynaha Somalia oo caddeeyay moowqifka Somalia ee dacwadda badda
(New York) 26 Sebt 2019 – Madaxweynaha Somalia Md Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad uu ka jeediyey Golaha Guud ee QM kusoo qaatay dacwadda badda ee haatan hortaalla Maxkamadda ICJ, kaddib markii ay kulmeen madaxda labada dal ee Somalia & Kenya oo isku arkay New York.
MW Farmaajo ayaa beesha Soomaaliyeed u xaqiijiyay in Somalia aanay marna ku qancayn wax aan ka ahayn in dacwadda badda loo daayo Maxkamadda ICJ ee ay iminka la taallo, iyadoo la ballansan yahay 4-ta Nofeembar.
Madaxwaynaha Somalia ayaa intaa raaciyay in ay sidaa isla qaateen markii uu la kulmay dhiggiisa Kenya ee Ahuru Kenyatta, isagoo sheegay inay Somalia aqbali doonto wixii kasoo baxa Hague.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo war kasoo baxay dowladda Kenya ayaa waxaa ka dhadhamayay inay doonayaan in kiiska badda xeer jajab lagu dhameeyo.
Previous articleDHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah ee SD oo noqday midka 2-aad ee ugu wayn Sweden (Soomaalida oo ka walaacsan)
Next articleDHEGEYSO: Kulamadii dhacay ee koobka Carabao & isku aadkiisa oo la sameeyay, Abaalmarinta Messi oo la isku hayo & naqshadda cusub ee garoonka AC Milan & Inter (Tebintii Xaaji)